မေ့နိုင်မည်မထင် – မြန်မာသတင်းစုံ
အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်ပေါ်ပေါက်လာပါက မောင်နှမအရင်းအခြာကသာ ကျောချင်းကပ် ရင်ချင်းအပ်လေ့ရှိကြောင်း စသည်ဖြင့်နားချသောကြောင့် ပိုးအိလွင်ကိုထပ်မွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖိုးဖိုးကလည်း မြေးအငယ်ဆုံးလေးကိုတုန်နေအောင်ချစ်သလို သူမဆန္ဒမှန်သမျှအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးသောဖိုးဖိုးကိုသူမကလည်း အလွန်ချစ်ခဲ့သည်။သူမကိုအလွန်ချစ်သောဖိုးဖိုး သူမကလည်းအလွန်ချစ်သောဖိုးဖိုးကွယ်လွန်တော့ သူမစာမေးပွဲဆက်မဖြေနိုင်တော့။ ထို့ကြောင့် ဆယ်တန်းကိုပြန်တက်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ကားပြခန်း နှင့်သွင်းကုတ်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ဖခင်နှင့် စိန်ရွှေရတနာဆိုင်ဖွင့်ထားသောမိခင်တို့၏ကြွယ်ဝမှုများကြောင့် အပူအပင်မရှိ ဘော်ဒါတက်နိုင်သော်လည်း အိမ်နှင့်မခွဲနိုင်သောသူမက သူငယ်ချင်းများနှင့်စုပြီး ဝိုင်းကျူရှင်သာတက်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းကစာတော်ခဲ့သောသူမကို မိဘတွေကလည်းယုံကြည်သည်။သူမဆန္ဒအတိုင်းသာဖြစ်စေသည်။တနေ့လျင် အနည်းဆုံး သုံးဝိုင်းခန့်လှည့်တက်နေရသည်။ သူမအိမ်မှာတော့ အင်္ဂါသောကြာ နှစ်ရက်သင်သည်။ကျူရှင်အကြိုအပို့အတွက် နှင်းအိလွင်က လုပ်ပေးသော်လည်း စီးပွားရေးဘွဲ့ရသူတဦးအနေဖြင့် မိဘကိုလည်းကူရင်း လုပ်ငန်းလည်းလေ့လာနေရသဖြင့် အချိန်လုရသည်။သူစိမ်းအမျိုးသားယာဉ်မောင်းနှင့်လည်း စိတ်မချသဖြင့် ဖေဖေ့ညီကိုခေါ်ကာ တာဝန်ပေးထားလိုက်သည်။
မူလကတည်းကခေါ်ထားသော်လည်း အိမ်ထောင်ကွဲပြီးစိတ်လေနေသောကြောင့် ရုတ်တရက်မလာခဲ့။(အိမ်ထောင်ကွဲသည်ဆိုရာမှာလည်း လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးအပြစ်မကင်းကြ။ဇော်မြင့်က ကာမဆက်ဆံရာမှာကြမ်းတမ်းသည်။တည့်တည့်ပြောရလျင် အလိုးကြမ်းသည်။လူကြီးတွေပေးစားသော ဇင်မာအောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီး မင်္ဂလာဦးညမှာ အိပ်ခန်းထဲရောက်ကြတော့ အလိုးခံရတော့မည်ဆိုတာသိနေသောဇင်မာအောင်မှာ ရှက်လည်းရှက် ကြောက်လည်းကြောက်မို့ ခမ်းနားစွာပြင်ထားသောမင်္ဂလာကုတင်ကြီးပေါ်ကိုမသွားရဲပဲ အိပ်ခန်းအလယ်ကောင်မှာ ခေါင်းလေးငုံ့ပြီးရပ်နေသောဇင်မာအောင်ရှေ့မှာ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကအဝတ်တွေအကုန်ချွတ်လိုက်တော့ “အို” ကနဲရွေတ်ပြီးမျက်နှာကိုလက်ဝါးလေးနှင့်အုပ်ထားသော သတို့သမီးအသစ်စက်စက်လေးကို စွေ့ကနဲပွေ့ကာအိပ်ရာပေါ်တင်လိုက်ပြီး တအိုအိုတအင်အင်ဖြစ်နေသောဇင်မာအောင့်ကိုယ်ပေါ်မှအဝတ်တွေကိုအကုန်ချွတ်ကာ ကာမစိတ်တွေထကြွလာအောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့်နှိုးဆွကာ စောက်ဖုတ်ကိုမလိုးပဲ ဖင်ကိုလိုးရန်ပြင်သည်။ ထင်မှတ်မထားသောအဖြစ်ကြောင့် မျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူးလေးဖြင့်တောင်းပန်နေသောဇင်မာအောင်ကိုကြည့်ရင်း ပိုပြီးလိုးချင်လာသောကြောင့် သူမငြင်းဆန်တောင်းပန်နေသည့်ကြားမှ ဖင်ကိုမရမကလိုးသည်။ မင်္ဂလာပွဲအတွက်စီစဉ်ကြစဉ်ကတည်းက ဇင်မာအောင်ကိုမြင်တိုင်း ယူပြီးရင်တော့ဖင်ကိုအရင်လိုးပစ်မယ် ဟု စိတ်ထဲက တေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
မိန်းကလေး သုံးယောက်ကိုတော့ဖင်လိုးဖူးသည်။တယောက်က သန္တာဆိုသောကောင်မလေးlထိုကောင်မလေးက သူနဲ့မှအပျိုရည်ပျက်ရခြင်းဖြစ်သည်။သန္တာကို သုံးလခန့်စောက်ဖုတ်ကိုလိုးပြီးနောက်မှ ဖင်ကိုလိုးခဲ့သည်။နောက်တယောက်က မခိုင်။မခိုင်ကယောက်ျားရှိလျက်နှင့်အနေဝေးနေသောကြောင့်ဆာလောင်နေခိုက်မှာ လင်ရှိမယားကိုကျူးလွန်ကာ ဖင်ပါလိုးခဲ့သည်။နောက်တယောက်က ကေသွယ်ဆိုသောတခုလပ်မလေးဖြစ်သည်။ထိုသို့ဖင်လိုးဖူးသော်လည်း သူဖင်လိုးချိန်မှာအပျိုစင်မဟုတ်ကြတော့။ အပျိုစစ်စစ်ကိုဖင်လိုးချင်စိတ်ပြင်းထန်နေခဲ့သူမို့ ယခု ဇင်မာအောင်နဲ့ရတော့ လိုးဖြစ်အောင်လိုးတော့သည်။သူဖင်လိုးတာကို အပျိုမလေးဇင်မာအောင်ခမျာ မျက်ရည်စက်လက်နှင့်ခံရရှာသည်။ဖင်လိုးခံရပြီးအိပ်ရာပေါ်မှာတရှုံ့ရှုံ့ငိုနေသောဇင်မာအောင်ကိုကြည့်ရင်း လီးပြန်တောင်လာကာ ဖင်တက်လိုးပြန်သည်။ သုံးရက်ဆက်တိုက်ဖင်ကိုချည်းပဲအလိုးခံရပြီး လေးရက်မြောက်ကျမှ စောက်ဖုတ်ကိုလိုးကာ အပျိုရည်ဖျက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလည်း တရက်မှမလွတ်။စောက်ဖုတ် ဖင် ပါးစပ် တခုခုကိုတော့အလိုးခံရသည်ချည်းသာ။သို့သော် သူကအပြီးမြန်သဖြင့် ဇင်မာအောင်မှာ အဆွခံရသလိုဖြစ်ကာ အာသာမပြေတော့ပဲ ဖေ့ဘွတ် သုံးပြီး ဆက်ချက် ရာမှ ငြိသွားပြီးအပြင်မှာချိန်းကာ အလိုးခံလိုက်မိတော့သည်။
အလိုးကျွမ်းသောသူ့ရင်ခွင်အောက်မှာ သူမ၏သွေးသားဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုတွေပြည့်ဝခဲ့ရသည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာချိန်းပြီးအားပါးတရလိုးခဲ့ကြတာတွေကို သူသိပြီးတရားစွဲမည်ပြုသောအခါ ဇင်မာအောင်ကလည်း သူမကိုဖင်လိုးတာ ပါးစပ်ကိုလိုးတာတွေ သူမကငြင်းဆန်ပုံတွေကို ဗီဒီယိုခိုးရိုက်ထားပြီးသားမို့ ဓမ္မတာနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးကာမကျူးလွန်မှုဖြင့်တရားပြန်စွဲမည်ဆိုသောအခါ သူလည်းတရားမစွဲရဲတော့ပဲ နှစ်ဦးသား ကွာရှင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါတွေကိုတော့ သူတို့နှစ်ဦးသာသိသည်။ကွာရှင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း စောက်ဖုတ်ပေါင်းများစွာကိုလှည့်ပတ်လိုးနေခဲ့သည်။လိုးပါများလာတော့ အချိန်ကြာကြာထိန်းတတ်လာသည်။ဝါသနာတူတွေ၏အကြံပေးမှုကြောင့် ဟိုဆေးလိမ်း ဒီဆေးလိမ်းနှင့် လီးကလည်းခုနစ်လက်မခန့်ရှိလာသည်။လုံးပတ်ကလည်း ဓာတ်ခဲသုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးအရွယ်ခန့်တုတ်လာသည်။)စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီး အနည်ထိုင်လာချိန်ကျမှ အစ်ကိုဖြစ်သူဆီပြန်လာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယာဉ်မောင်းရုံတငမဟုတ်ပဲ မီးပြင်တာ ရေပိုက်ပြင်တာလေးတွေပါ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်လုပ်သည်။ပိုးအိလွင်အိပ်ခန်းနှင့်ရေချိုးခန်းထဲမှမီးလုံး မီးခေါင်းလဲတာတွေလည်း သူလာလုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်လုံးတီးလေးနှင့်ပိုးအိလွင်က ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်လာချိန်မှာ…. ဇော်မြင့်က ကားဂိုဒေါင်အပေါ်ထပ်ရှိ သူနေထိုင်ရာအခန်းထဲမှာကုတင်ပေါ်လှဲပြီး ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်သည်။
သုံးလေးချက်လောက်နှိပ်လိုက်တော့ ကိုယ်လုံးတီးဖြင့်ရေချိုးနေသော တူမဖြစ်သူပိုးအိလွင်၏တပ်မက်ဖွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရသည်။သူလျို့ဝှက်တပ်ဆင်ထားခဲ့သောစပိုင်ကင်မရာလေးတွေက ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေသည်။ထိုကင်မရာလေးတွေ၏ကျေးဇူးကြောင့် နှင်းအိလွင်နှင့်ပိုးအိလွင်နှစ်ယောက်လုံး၏ခန္ဓာကိုယ်အလှအပတွေကို သူမြင်ဖူးခဲ့သည်။ သူမတို့ဖုန်းကြည့်ရင်း အာသာဖြေနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးကွင်းထုခဲ့တာလည်းအကြိမ်ကြိမ်။တူမအရင်းခေါက်ခေါက်တွေဖြစ်သော်လည်း သူစိတ်ဖောက်ပြန်နေခဲ့သည်။မသင့်တော်မှန်းသိသော်လည်း တပ်မက်စိတ်က တား၍မရ။ညီအစ်မနှစ်ဦး၏တင်တွေ ရင်တွေကိုခိုးခိုးကြည့်ရင်း “လုံးတင်းနေတာပဲကွာ….လိုးရတဲ့ကောင်တော့ကံကောင်းတာပဲ….“ဟုတွေးကာ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်အလိုးခံနေမည့်ပုံတွေကိုလည်းမြင်ယောင်ကြည့်ဖူးသည်။ အကြီးမနှင်းအိလွင်ထက် အငယ်မပိုးအိလွင်က ပို၍ရမ္မက်ကြီးသည်ဟုထင်သည်။နှင်းအိလွင်ကနေ့စဉ်အာသာမဖြေ။ပိုးအိလွင်က နေ့စဉ်အာသာဖြေသည်။အာသာဖြေရင်း ဖီးလ်တက်နေချိန်မှာလည်း နှင်းအိလွင်၏လှုပ်ရှားမှုကသာမန်မျှသာရှိပြီး ပိုးအိလွင်၏မျက်နှာအမူအယာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားနေပုံများက ရမ္မက်ကြီးသောမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်မှန်း သူ့အတွေ့အကြုံအရသိနေသည်။
တူမအရင်းတွေဆိုတော့လည်း လိုးခွင့်ရဖို့မဖြစ်နိုင်သည့်အတူတူ ပိုးအိလွင်အာသာဖြေနေတာကိုကြည့်ရင်း ကွင်းသာထုနေမိတော့သည်။ “ဟဲ့….ပိုးအိ….ဟိုမှာကြည့်စမ်း နှင့်ဦးနဲ့ငါ့အမေ….ခ်ခ်” ဒီနေ့က သရဖီတို့အိမ်မှာစာသင်အလှည့်။စာသင်ချိနိတနာရီခွဲခန့်သာကြာမည်မို့ ဇော်မြင့်ကဘယ်မှမသွားတော့ပဲ စောင့်နေကျဆိုတော့ ပိုးအိလွင်၏သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးနေချေပြီ။အိမ်ရှင်ကဧည့်ခန်းမှာစောင့်ဖို့ပြောသော်လည်းသူက ရပါတယ် ဟုသာပြောပြီး ကားထဲမှာသာဖုန်းပွတ်ရင်းစောင့်နေလေ့ရှိသည်။ဟန်နီဇော်တို့အိမ်မှာစာသင်လှည့်ကျလျင်လည်း ထိုသို့ပင်နေလေ့ရှိသည်။ထိုအခါမျိုးမှာ ဟန်နီဇော့်အမေ ယမင်းလှိုင်က ကားဆီအရောက် ကော်ဖီ မုန့် လက်ဖက်သုပ်စသည့်စားစရာတွေကိုယ်တိုင်ပို့ပေးတတ်သလို စကားမရှိစကားရှာပြီးပြောနေလေ့ရှိမှန်း မိန်းမချင်းမို့ ပိုးအိလွင်ရိပ်မိနေသည်။ အသက် ၃၄ မှာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်မုဆိုးမဖြစ်ခဲ့ရသော ယမင်းလှိုင်ကလည်း အခုအသက်၃၇ ရှိလာသော်လည်းလှပနေဆဲ။ကိုယ့်ဦးလေးကတခုလပ်ဆိုသော်လည်း မုဆိုးမနဲ့တော့သဘောမတူချင်။မမနှင်းအိလွင်ကိုပြောပြတော့ “ဖြစ်သွားတော့လည်း ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ….သူလည်းအိမ်ထောင်ပြုချင်ပြုမှာပေါ့”ဟုဆိုတော့ ပိုပြီးစိုးရိမ်ပြန်သည်။ဟန်နီဇော်ကလည်း သူ့အမေနှင့်သဘောတူသည်ဟုဆိုသည်။
ယခုပင်ရယ်ရယ်မောမောဖြင့်ခေါ်ပြနေသည်။အပေါ်ထပ်ပြူတင်းမှ သူမလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ဦးသားကားဘေးမှာရပ်ကာ ပြုံးပန်းတဝေဝေနှင့်စကားပြောနေကြတာတွေ့သည်။ သူမတို့ကြည့်နေစဉ်မှာပင် ယမင်းလှိုင်က ဇော်မြင့်လက်မောင်းကို အသာရိုက်လိုက်တာကိုတွေ့တော့ ဘယ်လိုဘယ်လိုသဝန်တိုမှန်းမသိ။ယမင်းလှိုင်အိမ်ဘက်ပြန်အလာမှာ “ဟဲ့ဟဲ့….နင့်ဦးကငါ့အမေဖင်ကြီးကိုကြည့်နေတယ်တွေ့လား….တနေ့ကလည်းအဲ့လိုကြည့်နေတာကို အမေ့ကိုပြန်ပြောပြတော့ အမေကလည်း ဒီကောင်မလေးဟာလေ ဆိုပြီးရယ်နေတယ်” ဟုတ်သည်။ယမင်းလှိုင်၏စွင့်ကားဆဲတင်ပါးကြီးကိ တပ်မက်စွာကြည့်နေတာကိုမြင်ရပြန်သည်။ုကျူရှင်အပြီးမှာ သူမကားပေါ်တက်တော့ “ပြီးပြီလားသမီး” “ပြီးပြီလေ….ပြန်မယ်….လေးလေးကမပြန်ချင်ဘူးမဟုတ်လား” “ဟားဟား….ဘာဖြစ်လာတာတုန်း” “လေးလေးတို့အကြည်ဆိုက်နေတာမတွေ့ဘူးထင်လို့လား….ဟင်း” ဇော်မြင့်ကရယ်မောရင်းကားမောင်းထွက်လာလိုက်သည်။တလမ်းလုံးလည်းဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက်လုပ်လာသည်။အိမ်ရောက်တော့မှ “မလိုင်လုံးဝယ်မလို့ လေးလေးလုပ်လို့မေ့လာပြီ အခုသွားပြန်ဝယ်ပေး” သူမကားပေါ်ကဆင်းပြီး နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ သူမတင်ပါးကိုကြည့်နေသောလေးလေးဇော်မြင့်မျက်လုံးတွေကိုမြင်လိုက်တော့ ပိုးအိလွင်ရှက်သွားသော်လည်း ဘာမှမပြောပဲအိမ်ထဲဝင်လာလိုက်သည်။
ဇော်မြင့်မလိုင်လုံးသွားပြန်ဝယ်ခိုက် ပိုးအိလွင်ရေချိုးနေရင်း “လေးလေးက အန်တီယမင်းကိုလုပ်ချင်နေတာသေချာတယ်….ဖင်ကိုကြည့်နေလိုက်တာများ….ဟင်း အင်းလေ….သူလည်းမိန်းမနဲ့ကွဲနေတာကြာတော့ လုပ်ချင်မှာပေါ့….ငါ့ဖင်ကိုကြည့်တာကျတော့ရော ငါ့ကိုလုပ်ချင်….အမလေး” အပျိုမလေး တွေးရင်းမျက်လုံးလေးဝိုင်းကာ အတွေးတဝက်မှာပင် ရင်ဖိုသွားရသည်။မှုခင်းသတင်းတွေမှာလည်း သွေးသားရင်းချာချင်း ကာမဆက်ဆံပြီးဗိုက်ကြီးလာသောသတင်းတွေဖတ်ရသည်။ တချို့ဆိုလျင် နှစ်နှင့်ချီပြီးလွန်ကျူးလာကြတာဖြစ်သည်။ “ငါ့ကိုလုပ်ချင်နေတာဆိုရင် ပေးလုပ်လိုက်ရလို့ကောင်းပါ့မလား ဦးလေးအရင်းနဲ့တူမအရင်းကြီး…. ဖေဖေတို့သိရင်လည်းပြဿနာတက်အရှက်ကွဲမှာ…. ငါကပေးမလုပ်လို့ အန်တီယမင်းကိုယူလိုက်ရင်ရော….ဟင့်အင်း….သဘောမတူဘူး….အဲ့ဒါဆို ငါကပေးလုပ်နိုင်ပါ့မလား….အာ….ရှုပ်နေတာပဲ” ၁၆ နှစ်အရွယ်အပျိုမလေး တွေးတတ်သလောက်လိုက်တွေးရင်း ရင်တွေဖိုနေခိုက် ဇော်မြင့်ကလည်း ပိုးအိလွင်ဖင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ခိုက် သူမကပြန်လှည့်အကြည့်မှာတွေ့သွားသော်လည်း ရှက်သွားပုံသာရပြီးစိတ်ဆိုးဟန်မပြသည့်တူမထွားထွားကြီးကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီး လိုးလိုက်ရရင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားနေသည်။နုဖတ်ကြွရွပြီး ချောမောလှပသလောက် ဖွံ့ထွားတောင့်တင်းလွန်းလှသည့်တူမနှစ်ယောက်အနက် အငယ်မကသာပို၍လွယ်ကူမည်ဟုတွေးမိသည်။
နှင်းအိလွင်က အသက် ၂၇ နှစ်ရှိနေပြီး မိဘလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပါ ဝင်ရောက်ကူညီစီမံခန့်ခွဲနေပြီဖြစ်ရာ လူကြီးတပိုင်းဖြစ်နေပြီမို့ စဖို့မလွယ်။ ပိုးအိလွင်ကလွယ်ကူနိုင်သည်။ရမ္မက်လည်းပို၍ထန်ပုံရသည်။တွေးရုံနှင့်ပင် လီးကတောင်လာသည်။စောက်ဖုတ်မလိုးရတာလည်းကြာပြီ။ငါ့လီးကြီးနဲ့သာထိုးသွင်းလိုက်ရင် ပိုးအိအော်လိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း….ရရင်တော့လိုးပစ်မယ်ကွာ….ကိုယ်မလိုးလည်း နောက်တော့သူများလိုးမှာပဲ ဟူသောအတွေးရိုင်းတို့ဖြင့်အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။မလိုင်လုံးဗူးလေးကိုင်ပြီးအပေါ်ထပ်တက်လာကာ ပိုးအိလွင်၏အိပ်ခန်းတံခါးကိုခေါက်လိုက်တော့ ကလစ်ကနဲမြည်ကာတံခါးပွင့်သွားပြီး အဖြူရောင်တဘက်ကြီးကိုရင်လျားထားသည့်ပိုးအိလွင်ကိုတွေ့ရသည်။ရေချိုးပြီးစဖြစ်ဟန်တူသည်။တဘက်ကသူမရင်သားတွေနှင့်ပေါင်လယ်လောက်အထိသာဖုံးကွယ်ထားနိုင်သဖြင့် ဝင်းမွတ်သောပုခုန်းသားလေးနှင့်ရင်ပတ်လေးအပြင် ပြည့်တင်းသောပေါင်လုံးကြီးတွေ၏တစိတ်တပိုင်းကိုတွေ့နေရသည်။ ဖုန်းထဲမှာမြင်ဖူးပြီးဖြစ်သော်လည်း အပြင်မှာအခုလိုမတွေ့ဖူးသေး။ သူ့အကြည့်တွေကိုသတိပြုမိသွားသော ပိုးအိလွင်က ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဟန်လေးဖြစ်သွားပြီးမှမသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ ရင်ပတ်ပေါ်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ယှက်ပြီး “အဲ့စားပွဲပေါ်မှာထားခဲ့….ကိုယ့်တူမအတွက်တောင်သတိမရနိုင်အောင် ပီတိတွေဖြာလာတာလေ….ဟင်း”။
ဇော်မြင့်ကအခန်းထဲဝင်ကာ မလိုင်လုံးဗူးလေးကိုစားပွဲပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီး “ယမင်းက ချောပါတယ်သမီးရဲ့….သမီးအန်တီချောချောလေးရမှာလေ” “သွား….သွား….အခုသွားယူ….သွား” ပိုးအိလွင်က ဇော်မြင့်၏ရင်ပတ်ကိုလက်သီးဆုပ်လေးများဖြင့်ထုသည်။ဇော်မြင့်ကရယ်မောရင်းသူမလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ရာ ပိုးအိလွင်က ရုန်းရင်းအိပ်ရာပေါ်သို့နှစ်ယောက်သားလုံးထွေး၍လဲကျသွားခိုက် သူမရင်ပတ်ပေါ်မှာစည်းနှောင်ထားသောတဘက်ကြီးကလည်းပြေကျသွားလေရာ ဖွေးအုဖွံ့ထွားတောင့်တင်းသောအပျိုစင်ခန္ဓာကိုယ်က ထင်းကနဲပေါ်လာတော့သည်။ပိုးအိလွင်ကကုတင်စောင်းမှာကိုယ်တပိုင်းတင်လျက်သားနှင့်ပက်လက်ကလေးဖြစ်နေပြီး ဇော်မြင့်က အပေါ်မှထပ်လျက်အနေအထားမှာ အဝတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဖြစ်နေသောပိုးအိလွင်ခမျာ ရှက်စိတ်တွေနှင့်ပူထူသွားသော်လည်း ဇော်မြင့်ကတော့ ရမ္မက်စိတ်တွေဟုန်းကနဲထကြွလာရသည်။ အဝတ်မဲ့အပျိုစင်မလေး၏တပ်မက်ဖွယ်ရာခန္ဓာကိုယ်အလှနှင့်နူးညံ့တင်းအိသောအထိအတွေ့တို့ကြောင့် စောက်ဖုတ်မလိုးရတာကြာပြီဖြစ်သောလီးချောင်းကြီးက ပုဆိုးအောက်မှာချက်ချင်းမတ်ထောင်လာခဲ့သည်။ ထိုလီးချောင်းကြီးက ပိုးအိလွင်၏စောက်ဖုတ်လေးပေါ်အမြှောင်းလိုက်ကြီးဖိကပ်သွားခိုက် ဇော်မြင့်မှာ ဘာလုပ်လိုက်မှန်းမိမိကိုယ်မိမိသတိမထားမိသေးခင်မှာပင် စောက်ဖုတ်ကိုလီးနှင့်ဖိ၍သုံးလေးချက်ညှောင့်လိုက်မိသည်။
အိပ်ရာပေါ်လဲကျခြင်းနှင့် လီးဖြင့်အညှောင့်ခံရမှုတို့ကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်သွားခဲ့သည်။ရုတ်တရက်တွေ့ကြုံလိုက်ရမှုအပေါ်မှာအပျိုမလေးနားထင်နားရင်းတွေပူထူကုန်သည်အထိထိတ်လန့်ရှက်ရွံ့သွားရသည်။သတိဝင်လာခြင်းနှင့်အတူ ပြေကျသွားသောတဘက်ကိုပြန်ပတ်ရန်ကြိုးစားရင်း ဇော်မြင့်ရင်ခွင်အောက်မှလွတ်စေရန် မ သဘာဝအရသူမခန္ဓာကိုယ်ကို အပေါ်ဘက်ရွှေ့လိုက်ရာ အိပ်ရာပေါ်သို့တကိုယ်လုံးရောက်ရှိသွားခဲ့သော်လည်း ဇော်မြင့်က ထပ်လျက်ပါလာခဲ့သည်။ဒီအနေအထားမှာတော့ ဇော်မြင့်နောက်ဆုတ်ဖို့စိတ်မကူးတော့။အခုနေနောက်ဆုတ်လိုက်လျင် နောက်နောင်ဒီအခွင့်အရေးမျိုးရရန်မလွယ်။ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ သူတို့စိတ်ပါအောင်ဆွနိုင်လျင် တက်လိုးခွင့်ပေးလေ့ရှိပြီး တခါအလိုးခံပြီးပါက နောက်ထပ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိုးဖို့အလိုအလျောက်ခွင့်ပြုပြီးဖြစ်တတ်သည်ကို သူ့အတွေ့အကြုံအရသိထားပြီးဖြစ်ရာ ယခုမိမိမလိုးလည်း တချိန်ချိန်မှာ တခြားသူကတက်လိုးမှာပဲမို့ ရအောင်လိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ကာ ကောင်မလေးစိတ်ထအောင်ဆွပေးဖို့ နီရဲရွှန်းစိုသောနှုတ်ခမ်းလွှာလေးကို အငမ်းမရဖိကပ်စုပ်ယူခြင်းဖြင့်စတင်လိုက်သည်။ ထင်မှတ်မထားသောအဖြစ်မှာရုတ်တရက်အငိုက်မိသွားသောပိုးအိလွင်ခမျာ ဇော်မြင့်ရင်ခွင်အောက်မှာနှုတ်ခမ်းအစုပ်ခံရင်း လူးလွန့်သွားရသည်။
ထို့နောက်ရုတ်ချည်းပင် ခေါင်းကိုဘယ်ညာရမ်းလျက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုရုန်းပြန်သည်။ဇော့်မင့်ကမလွှတ်ပဲ သူမခေါင်းလေးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ထိန်းပြီး တမင်ပင်တပြွတ်ပြွတ်အသံမြည်အောင်စုပ်သည်။ သူမပါးစပ်အတွင်းသို့လျှာထိုးထည့်လိုက်တော့ ပထမတွင်နှုတ်ခမ်းလေးက စေ့နေသော်လည်း မသိမသာလေးပွင့်ဟလာသည်။အထဲမှာလျှာခြင်းပွတ်သပ်ရင်း ညာဘက်လက်က နို့အုံဖွေးဖွေးကိုဖျတ်ကနဲဆုပ်နယ်လိုက်တော့ ပိုးအိလွင်ရင်ပတ်လေးကော့တက်သွားရသည်။ရည်းစားပင်မထားဖူးသေးသောကောင်မလေးမှာ အခုတော့အိပ်ရာပေါ်မှာကိုယ်လုံးတီးဖြင့် နှုတ်ခမ်းအစုပ်ခံ နို့အကိုင်ခံနေရတော့ ရှက်တာကြောက်တာတွေအပြင် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်၏အထိအတွေ့မှာသာယာတာကိုပါခံစားနေရသည်။ဒီအတိုင်းဆက်နေလျင် လေးလေးကမိမိကိုတက်လိုးတော့မည်ဆိုတာလည်း သဘာဝအရသိနေသည်။အပျိုစင်လေးမို့ စောက်ဖုတ်ထဲကိုလီးထိုးသွင်းခံရမှာကိုကြောက်နေမိသည်။သူမအလိုးမခံလျင် ယမင်းလှိုင်နှင့်ဖြစ်သွားမှာကိုလည်းလုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်။သို့သော် မိမိစောက်ဖုတ်ကိုတက်လိုးမည့်သူက ဦးလေးအရင်းဖြစ်နေသည်။ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမှန်းမသိသေးခင်မှာ နှုတ်ခမ်းချင်းပြွတ်ကနဲကွာသွားပြီး နို့အစို့ခံလိုက်ရတော့ ရင်ပတ်ထဲမှာအေးကနဲဖြစ်သွားရသည်။ “အိုး….လေးလေး….အာ” သူမဒီလောက်ပဲ အသံထွက်နိုင်သည်။ဇော်မြင့်၏လီးကြီးက ဘယ်အချိန်ကဘယ်လိုသူမပေါင်ကြားထဲရောက်လာမှန်းမသိ။
လီးကိုသူမပေါင်တံပြည့်ပြည့်ကြီးတွေနှင့်ညှပ်ထားသလိုဖြစ်ကာ ဇော်မြင့်ကသူမပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကိုခွထားပြီး လီးနှင့်လေးငါးချက်အညှောင့်ခံလိုက်ရတော့ သူမစကားမဆက်နိုင်။ပုဆိုးခံနေသော်လည်းလီးချောင်းကြီး၏အထိအတွေ့ကသိသာလှသည်။စောက်ဖုတ်ကိုလီးနှင့်အဆွခံနေရသလိုအပေါ်ပိုင်းမှာလည်းနို့စို့ခံနေရတော့ အထိအတွေ့မရှိဖူးသောအစိမ်းသက်သက်အပျိုမလေးခမျာ ရင်ဖိုလှိုက်မောကာ အသက်ရှူပင်မဝတော့သလိုဖြစ်လာသည်။ကျန်နို့တလုံးကိုပါပြောင်းစို့လိုက်တော့ “အာ့….လေးလေးရယ်….ဘာတွေလျှောက်လုပ်နေတာလဲ….အာ့ဟ” “လေးလေးအရမ်းလိုးချင်နေပြီသမီးရယ်….လေးလေးတို့လိုးရအောင်နော်” “အာ….ဟင့်အင်း….သမီးကြောက်တယ်” သူမကိုလိုးဖို့ဗြောင်ဖွင့်ပြောလာတာကိုကြားလိုက်တော့ အပျိုမလေးခမျာ တုန်တုန်ရီရီဖြင့်ငြင်းဆန်ရှာသည်။ “သမီးကောင်းအောင်လေးလေးလိုးပေးမှာပါ” “ဟင့်အင်းလေးလေးရယ်….အမျိုးအချင်းချင်းမလုပ်ပါနဲ့လေးလေးရယ်” “ဘယ်သူမှမသိပါဘူးသမီးရယ်….လေးလေးနဲ့သမီးနဲ့ပဲသိတာပါ” နှုတ်ကငြင်းဆန်နေသော်လည်းလူးလွန့်နေသည်မှလွဲ၍ရုန်းကန်ခြင်းမရှိသောကောင်မလေးကိုဆက်၍ဆွပေးရန်အတွက် စောက်ဖုတ်လေးကိုလီးနှင့်ထပ်ညှောင့်ပေးလိုက်ပြန်သည်။
“သမီးခွင့်မပြုရင်လေးလေးမလိုးပါဘူး….ပေါင်ကြားလေးထဲကိုပဲလိုးမယ်နော်—-အထဲကိုမသွင်းဘူးလေ” “အန်တီယမင်းနဲ့မဖြစ်ရဘူးနော်” “မဖြစ်ပါဘူးသမီးရယ်….စိတ်ချ” “အခန်းတံခါးကြီးကပွင့်နေတယ်” အခြေအနေကောင်းပြီဆိုတာရိပ်မိလိုက်သည်။ “ဘယ်သူမှမလာပါဘူး” အိမ်ဖော်တွေက သူတို့မခေါ်ပဲအပေါ်ထပ်ကိုလုံးဝတက်ခွင့်မရှိ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်လိုးလို့ရသည်။ “အာ….ပိတ်လိုက်ပါ” ဇော်မြင့်အခန်းတံခါးပိတ်ကာ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ စပို့ရှပ်ကိုချွတ်လိုက်သည်။တက်ခွပြီးအညှောင့်ခံခွင့်ပြုလိုက်မိသောပိုးအိလွင်က ဇော်မြင့်၏ရင်အုပ်နှင့်လက်မောင်းကြွက်သားတွေကိုကြည့်ရင်း ရင်ဖိုနေခိုက် ဇော်မြင့်က သူ့ခါးမှပုဆိုးကိုပါချွတ်ချလိုက်ရာ ခေါင်းတရမ်းရမ်းဖြစ်နေသော လီးချောင်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့် ရင်ထဲမှာဒိန်းကနဲဖြစ်ပြီးနှုတ်ခမ်းအစုံကို လက်ဖျားလေးဖြင့်ပိတ်လိုက်မိသည်။ ဇော်မြင့်ကအိပ်ရာပေါ်တက်လာချေပြီ။သူမအသက်ရှူသံလေးတွေမြန်လာသည်။ဦးလေးအရင်းက သူမကိုတက်ခွပြီး စောက်ဖုတ်လေးကိုလီးချောင်းကြီးနှင့် အထိုးခံရပေတော့မည်။အိပ်ရာပေါ်မှာကိုယ်လုံးတီးဖြင့်ပက်လက်လှန်ပေးထားသောပိုးအိလွင်၏တပ်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလှသောခန္ဓာကိုယ်ဖွေးဖွေးလေးကို ရမ္မက်ထန်နေသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်လိုက်ပြီး ပိုးအိလွင်၏ပေါင်နှစ်လုံးကိုကားလိုက်တော့သူမယောင်ရမ်းပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဖဝါးဖြင့်အုပ်လိုက်မိသည်။
ထိုအခါသူမလက်ဖမိုးလေးကို လီးထိပ်ကြီးက လာဖိသည်။လီးထိပ်မှာစို့နေသောအရည်ကြည်ပျစ်ချွဲချွဲလေးတွေက လက်ဖမိုးပေါ်ပေကုန်သည်။ထိုအခါ အို့ ကနဲအသံလေးထွက်လာပြီး လက်ဖမိုးလေးကိုအိပ်ရာခင်းဖြင့်သုတ်လိုက်ရာ အကာအကွယ်မဲ့သွားသောစောက်ဖုတ်လေးကိုလီးကလာထိသည်။သူမထိတ်လန့်စွာဖြင့် “လေးလေး….ဟို….မသွင်းနဲ့နော်လေးလေး” “မသွင်းပါဘူးသမီးရယ် ….ပေါင်ကြားထဲကိုပဲလိုးမှာပါ လေးလေးလီးကိုသမီးပေါင်နဲ့ညှပ်ထားပေးနော်” သူမမျက်နှာလေးရဲသွားသော်လည်းဘာမှမပြောပဲပေါင်နှစ်လုံးကိုအသာစေ့ပေးသည်။ပြည့်တင်းသောပေါင်သားအိအိနှစ်လုံးကြားမှာလီးကအလိုက်သင့်ညပ်သွားပြီးစောက်ဖုတ်လေးအပေါ်ကိုလည်းအမြှောင်းလိုက်ဖိကပ်မိနေတော့ ကောင်မလေးခမျာကြက်သီးမွေးညှင်းလေးများပင်ထသွားရသည်။စောက်ဖုတ်ထဲကအရည်ကြည်တွေယိုစိမ့်ကျလာတာကိုလီးချောင်းကြီးမှာစိုသွား၍သိလိုက်သည်။ပင်ကိုယ်ကပင်ရမ္မက်ကြီးပြီး အထိအတွေ့မရှိဖူးသေးသောအစိမ်းသက်သက်အပျိုစင်လေးခမျာ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်တယောက်ကကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီးတက်ခွတာကိုခံရမှတော့ စိတ်မထပဲဘယ်နေလိမ့်မလဲ။ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲမှာညပ်နေသောလီးချောင်းမာမာကြီး၏ပူနွေးသောအထိအတွေ့က သူမအဖို့ရင်ဖိုလှိုက်မောစေသည်လေ။
ဇော်မြင့်ကအသာစညှောင့်သည်။ပေါင်တွင်းသားနုနုလေးတွေကိုသာမက စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းအိအိလေးကိုပါလီးနှင့်ပွတ်တိုက်ခံရသောအပျိုမလေးခမျာ တဟင်းဟင်းအသံတွေထွက်လာတော့သည်။ နို့တွေကိုပါထပ်စို့ပေးလိုက်ပြန်တော့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကပါလူးလွန့်လာရသည်။ပွင့်ဟနေသောနှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးကိုစုပ်နမ်းလိုက်ချိန်မှာ သူမကပါအငမ်းမရပြန်လည်စုပ်လာတော့သည်။ နှုတ်ခမ်းချင်းအပြန်အလှန်မွတ်သိပ်စွာစုပ်နမ်းရင်း အတန်ကြာအောင်ညှောင့်ပေးလိုက်တော့ စောက်ဖုတ်ထဲမှအရည်တွေပို၍ရွှဲလာသည်။ပိုးအိလွင်ထံမှ တဟင်းဟင်း ငြီးသံလေးတွေလည်းပို၍စိပ်လာသည်။နှုတ်ခမ်းချင်းခွာကာနို့တွေကိုစို့ပြန်သည်။ အောက်ပိုင်းမှာညှောင့်ပေးနေတာကလည်းမရပ်။ အပျိုမလေးနေရခက်လှသည်။ရင်ခွင်အောက်မှာလူးလွန့်နေသောကောင်မလေးကိုကြည့်ရင်းဗြူဟာတမျိုးပြောင်းလိုက်ပြန်သည်။နို့အုံဖွေးဖွေးလေးတွေကို အောက်ခြေမှပင့်၍ဆုပ်နယ်ရင်း နို့သီးခေါင်းရဲရဲလေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့်ညှပ်၍ချေပေးလိုက်တော့ “အိုဟိုဟို….အာ့ဟ….လေးလေးရယ်….အာ” ကောင်မလေးခမျာရင်ပတ်ကလေးပင်ကော့တက်လာရသည်။ သူ့ကိုလည်းအတင်းပြန်ဖက်ကာ သူမပေါင်နှစ်လုံးကြားရှိလီးချောင်းကြီးကိုလည်း ပေါင်သားတွေဖြင့်တအားဖိညှပ်လာသည်။
လိုးမယ်ဆိုလည်းငြင်းမည့်အနေအထားမရှိတော့။ဖိုမအထိအတွေ့ကိုမကြုံဖူးသည့် မနူးမနပ်အပျိုမလေး ကာမစိတ်တွေထကြွလာပြီဆိုတာသူသိနေသော်လည်း မလိုးသေး။သူမကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလားခွင့်ပြုသည်အထိဆွပေးပြီးမှ အားရပါးရတက်လိုးဖို့ကြံထားသည်။ဒါမှသူ့အလွန်မဖြစ်မှာလေ။ “ကောင်းလိုက်တာပိုးအိရယ်….ပေါင်ကြားထဲကိုလိုးရတာတောင်ဒီလောက်ကောင်းနေတာ အထဲကိုသွင်းပြီးတော့သာလိုးလိုက်ရရင် ဘယ်လောက်အရသာရှိလိုက်မလဲမသိဘူး….” “မြန်မြန်လုပ်ပါလေးလေးရယ်….သမီးမနေတတ်တော့ဘူး” “ဘာလို့မနေတတ်တာလဲ” “လေးလေးဟာကြီးက မာတောင်ပြီး လာလာပွတ်နေတာက်ိုး….ဟင့်….အ” “အဲဒါသမီးစောက်ဖုတ်လေးကိုလိုးချင်လို့ မာတောင်နေတာလေ” “အာ….မြန်မြန်လုပ်ပါဆို ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး” “ပေါင်ကြားထဲကိုလိုးရတာဆိုတော့ ကြာတာပေါ့သမီးရဲ့….အထဲကိုသွင်းမှမြန်မြန်ပြီးမှာလေ” “သွင်းလို့ရပါ့မလားလေးလေးရယ်….လေးလေးဟာကြီးက အကြီးကြီးဟာကို” “ရတာပေါ့သမီးရယ်” “မထူးတော့ပါဘူး….သွင်းချင်လည်း သွင်းလိုက်ပါတော့” သူလိုချင်သောစကားကိုရလေပြီ ကောင်မလေးကကြည်ဖြူစွာလိုးခွင့်ပြုနေပြီမို့ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ကောင်မလေး၏ခြေသလုံးသားလေးနှစ်ဖက်ကို ပုခုန်းပေါ်ထမ်းတင်လိုက်တော့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက အောက်မှပြူးထွက်လာသည်။
တကယ်တမ်းအလိုးခံရတော့မယ်ဆိုတော့ ကောင်မလေးတကိုယ်လုံးတုန်ယင်လာသည်။အာသာဖြေတာတောင် စောက်စေ့ကိုပွတ်၍သာ အာသာဖြေဖူးသည်။စောက်ဖုတ်ထဲကိုလက်တောင်မထည့်ခဲ့။ ထိုစောက်ဖုတ်လေးထဲကို လီးချောင်းတုတ်တုတ်ကြီးထိုးသွင်းပြီးအလိုးခံရတော့မည်ဆိုတော့ ကြောက်လည်းကြောက်သည်။လိုးမည့်သူကလည်းသူစိမ်းမဟုတ် ဦးလေးအရင်း။သို့သော်အလိုးခံချင်စိတ်ကို သူမမထိန်းနိုင်တော့။ဇော်မြင့်က အရည်ရွှဲနေသောစောက်ဖုတ်လေးအပေါ်သို့ တံတွေးထပ်ထွေးချလိုက်ပြီး သူ့လီးကြီးကိုလည်း တံတွေးဆွတ်ကာ ပိုးအိလွင်၏ စောက်ဖုတ်အဝမှာတေ့ပြီးထိုးသွင်းလိုက်သည်။ “ဗြစ်ဗြစ်….အီး….ပြွတ်ပြွတ်ဗြစ်….အားအား….အမလေး နာတယ်လေးလေးရယ်….အ….ဖြေးဖြေးသွင်းပါအား” လီးဒစ်ဝင်ရုံသာရှိသေးသည်။ကောင်မလေးမျက်ရည်ကျလာပြီ။နောက်ဆုတ်လို့တော့မဖြစ်။ပထမဆုံးအချီမှာရအောင်လိုးနိုင်လျင် နောက်ထပ်လိုးလို့ရပြီ။အခုနေနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်လျင် လီးအသွင်းခံရသည့်နာကျင်မှုကိုကြောက်လန့်ပြီး နောက်အလိုးခံတော့မှာမဟုတ်။အတင်းထိုးသွင်း၍စောက်ဖုတ်လေးကွဲသွားလျင်လည်းပြဿနာတက်နိုင်သည်။ ဝင်နေသောဒစ်ကြီးကိုပြန်ချွတ်လိုက်ပြီး ကုတင်ဘေးရှိမှန်တင်ခုံပေါ်မှ အုန်းဆီပုလင်းလေးကိုလှမ်းယူလိုက်သည်။
လီးကျွတ်ထွက်သွားတော့ပိုးအိလွင်က သူမစောက်ဖုတ်လေးကိုလက်ကလေးနှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်ထားပြီးဇော်မြင့်ကိုလိုက်ကြည့်နေသည်။အုန်းဆီပုလင်းကိုင်ပြီးကုတင်ပေါ်ပြန်တက်လာတော့ “လေးလေး….အီးဟီးဟီး….သမီးကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့လေးလေးရယ်….သမီးအရမ်းနာလို့ပါ….ဟီး” ကောင်မလေးကငိုယိုကာတောင်းပန်နေသော်လည်း “ဆီဆွတ်သွင်းရင် သမီးမနာတော့ဘူး စိတ်ချ….သမီးအရသာရှိအောင်လေးလေးလိုးပေးမယ်” သူမကိုဆီဆွတ်လိုးတော့မည်ဆိုတာရိပ်မိလိုက်သည်။လီးပေါ်ကိုအုန်းဆီတွေလောင်းချကာ လီးတချောင်းလုံးနှံ့သွားအောင်လိမ်းလိုက်သည်။ မတ်ထောင်နေသောလီးချောင်းကြီးကအကြောတွေပြိုင်းပြိုင်းထနေပြီးခေါင်းတဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ကာ ငါ့စောက်ဖုတ်ကိုလိုးမယ့်လီးကြီးပါလား ဟု တွေးမိလိုက်တော့ ကျောထဲကစိမ့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ကြက်သီးများပင်ထမိသည်။သူမပေါင်နှစ်လုံးကိုထောင်ကာ ဘေးသို့ကားလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်လေးပေါ်ကိုလည်းအုန်းဆီတွေလောင်းချသည်။သူမကြည့်လည်းမကြည့်ရဲ မျက်နှာလည်းမလွှဲနိုင်။လက်တဖက်ကအုန်းဆီလောင်းချရင်း လက်တဖက်က လီးကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက်ပွတ်ဆွဲနေရာမှ စောက်ဖုတ်အဝလေးမှာစက်ဝိုင်းဝိုင်းသလိုခပ်ကြမ်းကြမ်းဖိပွတ်လိုက်တော့ အလိုးခံရတော့မည့်ကောင်မလေးခမျာ ငိုတော့မလိုမျက်နှာလေးနှင့် အင်ဟင်ဟင်….အင်ဟင်ဟင် ဟူသော ငိုသံလိုလို ငြီးသံလိုလိုအသံလေးထွက်လာသည်။
ဇော်မြင့်ကဆီဆွတ်တာကိုရပ်လိုက်ပြီးကောင်မလေး၏ထောင်ထားသောပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်သည်။သူ့လက်မှာပေနေသောအုန်းဆီတွေကို ချွတ်ထားသောပုဆိုးနှင့်သုတ်လိုက်ပြီး ကောင်မလေး၏စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားဖောင်းဖောင်းလေးတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆွဲဖြဲကာ လီးထိပ်ကြီးတေ့လိုက်သည်။ “အဟင့်ဟင့်….လေးလေး….” အလိုးခံရတော့မည်ဟူသောအသိက အပျိုမလေး၏ တကိုယ်လုံးကိုရှိန်းကနဲဖြစ်သွားစေသည်။လီးဒစ်ကြီးဗြစ်ကနဲဝင်လာသည်။ “အားဟား….လေ့လေ့” အသက်အောင့် အံကြိတ်ပြီးပြောလိုက်သံလေးက လေးလေး ဟုပင်မထွက်ပဲ လေ့လေ့ ဟုထွက်လာသည်။ဖင်ကိုတောင်ရအောင်လိုးလာသောဇော်မြင့်က စောက်ဖုတ်ဆီဆွတ်လိုးရတာကိုစာဖွဲ့မနေ။ ဒစ်မြုတ်နေပြီဖြစ်သောလီးကိုထပ်သွင်းသည်။ “ပြွတ်ပြွတ်….ဗြစ်ဗြစ်ဗြစ်” “အားအား….နာတယ်….အား” နာကျင်စွာအော်ရင်းကယောင်ကတမ်းနှင့်ပြန်တွန်းလိုက်သောလက်ကလေးက စောက်ဖုတ်ထဲမှာတစ်လစ်ကြီးဝင်နေသောလီးချောင်းကြီးကိုဆုပ်ကိုင်မိလျက်သား။ ပူနွေးမာတောင်နေသောလီးချောင်းကြီးကိုအမှတ်တမဲ့ကိုင်လိုက်မိသောအပျိုမလေးခမျာ သူမဆုပ်ကိုင်လိုက်မိသောအရာသည် လီးချောင်းကြီးဆိုတာသိလိုက်သည်နှင့် ဓာတ်လိုက်ခံရသလိုတွန့်သွားပြီး ချက်ချင်းပြန်လွှတ်လိုက်သည်။
တဝက်ခန့်ဝင်နေသောလီးကြီးကိုအနည်းငယ်ပြန်ဆွဲထုတ်ကာ လီးချောင်းကြီးပေါ်အုန်းဆီတွေမျှင်းမျှင်းလေးလောင်းချနေရင်း ဝင်နေသလောက်ကိုအသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တော့ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေကိုပါဆီဆွတ်သလိုဖြစ်သွားသဖြင့်အဝင်အထွက်လွယ်ကူလာသည်။ကျပ်သိပ်သောအထိအတွေ့ကိုတော့နှစ်ဦးလုံးခံစားနေရသည်။တဖြေးဖြေးဖိဖိသွင်းရင်း လီးထိပ်ကအပျိုမြှေးကိုထောက်မိသည်။ပိုးအိလွင်လည်းတကိုယ်လုံးချွေးတွေပြန်နေပြီးတအီးအီးတအားအားအဆက်မပြတ်ငြီးငြူနေရသည်။ယခင်ကစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သောလီးအသွင်းခံခြင်းကိစ္စကို ယခုတော့လက်တွေ့ကြုံရချေပြီ။ပထမဆုံးလီးအသွင်းခံရလျင်နာကျင်မည်ဆိုတာ တခြားမိန်းကလေးတွေလို သူမလည်းသိခဲ့သည်။သွင်းမယ့်လီးကသေးသေးကွေးကွေးလည်းမဟုတ်။ အခုတော့ဆီဆွတ်သွင်းရင်း တစ်ဝက်ကျော်ကျော်ဝင်နေချေပြီ။ဇော်မြင့်က ပိုးအိလွင်ကိုယ်လုံးအိအိလေးပေါ်မှောက်ချကာ နှုတ်ခမ်းအစုံကိုအတင်းဖိကပ်စုပ်ရင်း အောက်ပိုင်းမှလီးကိုအရှိန်ယူပြီးဆောင့်သွင်းပစ်လိုက်သည်။ “ဗြစ်ဗြစ်ဗြစ် ….ဖောက်….ဒုတ်..အီး….အုအု….ဝူး” လီး တဆုံးဝင်အောင်ဆောင့်သွင်းခံလိုက်ရသောပိုးအိလွင်ခမျာ မချိမဆန့်နာကျင်မှုစွာအော်လိုက်သော်လည်း နှုတ်ခမ်းအစုပ်ခံထားရသဖြင့် အော်သံကပီပီပြင်ပြင်မထွက်။
အပျိုစင်စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ကြီးထွားရှည်လျားသည့်လီးချောင်းကြီးဖြင့်ဆောင့်သွင်းခံလိုက်ရသောပိုးအိလွင်ခမျာ မချိမဆန့်နာကျင်မှုနှင့်အတူ နားထဲမှာဗြစ်ဗြစ်ဗြစ်ဗြစ်ဟူသောအသံကြားလိုက်ရပြီး လီးထိပ်ကသားအိမ်ကိုဒုတ်ကနဲလာဆောင့်သဖြင့် အောင့်သွားသောဝေဒနာကိုပါခံစားလိုက်ရသည်။ဘယ်လီးမှအသွင်းမခံဖူးသေးသောစောက်ဖုတ်လေးမှာ လီးချောင်းတုတ်တုတ်ကြီးထိုးသွင်းခံထားရသဖြင့် ပြည့်သိပ်တင်းကျပ်ကာ ကွဲထွက်မတတ်ဖြစ်နေသည်။ရုတ်တရက်မို့အသက်ပင်မရှူနိုင်ပဲ တအင်းအင်းဖြစ်ကာ အသံထွက်ငြီးငြူလိုက်ရလျင်အနာသက်သာမလားဟူသော မသိစိတ်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းလေးအစုံကိုလွတ်လိုလွတ်ငြားရုန်းနေသော်လည်း ဇော်မြင့်ကချက်ချင်းလွှတ်မပေးသေးပဲ အသံမမြည် မြည်အောင် လေးငါးချက်ခန့်တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်ပြီးမှလွှတ်ပေးလိုက်သည်။ “အား….အမလေး….လေးလေးရယ်….အရမ်းနာတယ်….ကွဲပြဲကုန်ပြီလားမသိဘူး….အဟင့်ဟင့်….အမလေးလေး….အား….ရှီး….ကျွတ်ကျွတ်” “မကွဲပါဘူးသမီးရယ်….သမီးစောက်ဖုတ်လေးကကျဉ်းနေလို့ပါ” “လေးလေးဟာကြီးကကြီးတာကိုးလို့….ဟင့်ဟင့်….နည်းနည်းပါးပါးမညှာဘူး….အား” “အခုလီးတဆုံးဝင်သွားပြီလေ….သမီးနောက်ထပ်မနာတော့ပါဘူး” “အမလေး….ဒါ့ထက်ထပ်နာရင်လည်းသေဖို့ပဲရှိတော့တယ်” စကားပြောကာ အာရုံလွှဲရင်း နားရွက်လေးကိုနမ်းလိုက် လည်ပင်းလေးကိုနမ်းလိုက် နို့အုံကိုဖွဖွဆုပ်နယ်ကာ နို့သီးခေါင်းလေးကိုချေပေးလိုက်ဖြင့် ဆက်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူမအနာသက်သာသလိုဖြစ်လာသည်။
စောက်ဖုတ်ထဲကိုလီးထိုးသွင်းခံရသောပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာ သူမအတွက် မေ့နိုင်မည်မထင်တော့။သက်သာလာသည်ဆိုသော်လည်း နာတော့နာနေဆဲ။တင်းကျပ်တစ်ဆို့နေသည့်အတွက်လည်း နေရခက်နေသည်။ထိုအခိုက်မှာ ဇော်မြင့်က လီးကိုအသာပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ သက်သာသလိုလိုဖြစ်သွားခိုက် ဒစ်ဖျားလောက်အရောက်မှာ ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်ပြန်သည်။သူမ အိ ကနဲအသံလေးထွက်သွားစဉ် လီးကတဝက်လောက်မှာရပ်ပြီးပြန်ဆွဲထုတ်သွားပြန်သည်။ထို့နောက်ပြန်ဝင်လာပြန်သည်။အခုမှအလိုးခံဖူးသောအပျိုမလေးခမျာ သူမစောက်ဖုတ်ကို ချော့လိုးလိုးနေမှန်းမရိပ်မိ။ဆီဆွတ်အလိုးခံရတာမို့ လီးအဝင်အထွက်လေးငါးခါလောက်လုပ်လိုက်တော့ ဆီတွေ အရည်ကြည်တွေ နှင့်အတူ ပါကင်အဖွင့်ခံရမှုကြောင့်အပျိုမြှေးပေါက်သွားသဖြင့်စောက်ဖုတ်ထဲမှထွက်လာသောသွေးတွေကလည်း လီးအဝင်အထွက်ချောမွေ့စေရန်ကူညီပေးသလိုဖြစ်နေသည်။လေးလေးဇော်မြင့်သည် သူမစောက်ဖုတ်ကိုလိုးရင်း လီးကိုမသိမသာပိုပိုသွင်းနေတာကို သူမရိပ်မိစပြုလာသည်။နူးညံ့အိစက်ကျဉ်းမြောင်းသောစောက်ဖုတ်အတွင်းသားလေးများကို ပူနွေးမာကြောသောလီးချောင်းကြီးကပွတ်တိုက်နေမှုသည် ဘယ်လိုပါဟုပြောမပြတတ်သောအရသာကိုပေးစွမ်းနေမှန်းလည်းသိလာသည်။အလိုးခံရသောအရသာကိုသိလာသောအပျိုမလေးမှာ သူမကိုတက်လိုးနေသောလေးလေးဇော်မြင့်ကို အလိုလိုဖက်လိုက်မိသည်။
ထိုအခိုက်မှာလီးကတဆုံးဝင်လာသည်။ “အီး….အအ” “နာလို့လားသမီး” “အင်း….နာတယ် ….ဒါပေမဲ့လုပ်ပါ ရပါတယ် အား” တူမဖြစ်သူ၏ရမ္မက်စိတ်ကို ဇော်မြင့်အံ့သြသွားရသည်။ နာကျင်မှုကိုကြိတ်မှိတ်ခံရင်း ဆက်လုပ်ခိုင်းသောမိန်းကလေးအချို့ကိုကြုံဖူးသည်လေ။ “နာတော့နာတယ် ….ဒါပေမဲ့ နာမှအားရတယ်” ဟူသောမိန်းကလေးတွေကို အားမနာစတမ်း မညှာမတာလိုးပစ်ခဲ့ဖူးသည်။ဇော်မြင့်ကလည်း ထိုမိန်းကလေးမျိုးကိုကြိုက်သည်။လိုးနေရင်းအရှိန်တက်လာပြီး အားရပါးရဆောင့်နေချိန်မှာ လူးလှိမ့်အော်ငြီးရင်း ဖြေးဖြေးလုပ်ဖို့ပြောလာလျင် လိုးရတာ ဖီလင်အောက်သည်ဟုထင်သည်။ဇော်မြင့်ကတော့ ညှာရိုးထုံးစံမရှိ။နာကျင်မှုကြောင့် ဘယ်လောက်ပင်ထွန့်ထွန့်လူးနေပါစေ စိတ်ရှိလက်ရှိလိုးပစ်သည်ချည်း။နာမှအားရတယ်ဆိုသောမိန်းကလေးမျိုးကျတော့ သူ့လီးချောင်းကြီးနှင့်အသားကုန်အဆောင့်ခံရလျင် အော်သည် ငိုသည် သို့သော် အလိုးကြမ်းတာကိုမတား။အဲ့ဒါမျိုးကိုသူအလွန်ကြိုက်သည်။ယခုတွေ့ရပြန်ချေပြီ။ “အဲ့ဒါဆို လေးလေးဆောင့်မယ်နော်” “ဟုတ်….လေးလေး” “မခံနိုင်ရင်ပြောနော်” သူမခေါင်းလေးညိတ်ပြသည်။မျက်နှာလေးကတော့ ရှုံ့မဲ့နေလျက်။ ဇော်မြင့်က ပိုးအိလွင်၏ပုခုန်းလေးနှစ်ဘက်ကို ချိုင်းအောက်မှလက်လျှို၍တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ တချက်ချင်းစ၍ဆောင့်သည်။ ဆောင့်ချက်တိုင်းက သားအိမ်ကိုထိသဖြင့် ပိုးအိလွင်အင့်ကနဲ အင့်ကနဲဖြစ်နေသည်။လေအေးစက်ဖွင့်ထားသော်လည်း သူမနဖူးဆံစပ်နှင့်နှာသီးဖျားလေးမှာ ချွေးလေးတွေစို့နေသည်။
ဖွံ့ထွားတောင့်တင်းပြီးချောမောလှပသလောက် နုအိဝင်းမွတ်နေသောခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင် အပျိုစင်တူမအရင်းခေါက်ခေါက်လေးကို ပါကင်ဖွင့်လိုးနေရင်း ရမ္မက်ထန်လာတော့ ဇော်မြင့်ဆောင့်ချက်တွေပို၍စိပ်လာသည်။ပို၍လည်းအားပါလာသည်။အလိုးခံနေရသောပိုးအိလွင်ခမျာ နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်း နာတာကပိုတာလား ကောင်းတာကပိုတာလားမခွဲခြားနိုင်တော့။တအီးအီးတအားအားအော်ရင်း ဦးလေးဖြစ်သူ၏အလိုးကိုခံနေရသည်။စောက်ဖုတ်ထဲကအရည်တွေပိုရွှဲလာသလို မျက်ရည်တွေလည်းပြန်ကျလာသည်။နာသည်။ဘယ်လောက်နာတယ်ဆိုတာပြောမပြတတ်အောင်နာသည်။ကောင်းတာကလည်း ကောင်းလွန်းလှသည်။ဆောင့်ချက်တွေပိုကြမ်းလာတော့ “အား….အား….လေးလေး….အ….သေပါပြီလေးလေးရယ် အဟင့်ဟင့်….အင့်အင့်အင့် အာ့….အင့် အားအားအား အမလေး….အီး -” “မခံနိုင်ရင်ပြောနော်သမီး” ဇော်မြင့်က ထပ်ပြောသော်လည်း ပြင်းထန်လွန်းသောဆောင့်လိုးချက်တွေကို အလူးအလဲခံနေရသော ပိုးအိလွင်ခမျာပြန်ပင်မပြောနိုင်။ထိုအခါ ဇော်မြင့်က သူမခံနိုင်သည်ဟုတွေးကာ မညှာမတာဆောင့်ဆောင့်လိုးလေတော့ရာ ပို၍လည်းနာ ပို၍လည်း ကောင်းလာပြီးတွန့်လိမ်ကော့ပျံကာ ပထမဆုံးအချီပြီးသွားလေတော့သည်။သူမစောက်ဖုတ်ကိုဆောင့်ဆောင့်လိုးနေသောလီးချောင်းကြီးကို စောက်ဖုတ်ကြွက်သားများဖြင့်ညှစ်ရင်း “အအကောင်းလိုက်တာလေးလေးရယ်….အား” ကော့တက်လာသော တူမဖြစ်သူ၏နို့နှစ်လုံးကိုစုံကိုင်ဖျစ်ညှစ်ရင်း အဆက်မပြတ်စိတ်ရှိလက်ရှိဆောင့်ဆောင့်လိုးရင်း စောက်ဖုတ်အသစ်စက်စက်ကလေးထဲသို့ သုက်ရည်များပန်းထည့်လိုက်လေတော့သည်……… ပြီးပါပြီ။
တ်ာတော့ဟာ.. ဆက်မပြောနဲ့တော့.. ငါဒီကောင့်အကြောင်း မကြားချင်တော့ဘူး.. အစ်မကလဲဗျာ.. ချစ်တုံးကတော့ ချစ်လိုက်တာတုန်လို့… အခုမှဘာဖြစ်ရပြန်တာလဲ.. နင်မသိဘူး..ဝေဖုန်း..နင်မသိတာတွေအများကြီး..ငါသူ့ကို ဆက်သည်းမခံနိုင်တာတွေအများကြီးရယ် ဟုတ်လား.. ဒါဆိုလဲဗျာ.. သူဖုန်းဆက်ပါလိမ့်မယ်.. လက်ခံစကားပြောပြီးတော့..အပြတ်ပြောသင့်ရင်လဲ ပြောလိုက်တော့… ကျွန်တော်အောင်သွယ် ပေးထားတာဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုလာပြီး နားပူနေတယ်.. အစ်မ ကောင်က….. ဘာငါ့ကောင်လဲ.. ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူး.. မပတ်သတ်ချင်တော့ဘူးဟာ.. ဖုန်းဆက်လာရင် ကိုင်လိုက်မယ်..ငါ့ ကိစ္စ ငါရှင်းမယ်.. ကျေနပ်ပြီလား.. နင်သာသူများအတွက်နဲ့ မျက်နှာပျက်မခံနဲ့တော့.. ငါနင့်ကိုပါ စိတ်ဆိုးလိုက်မှာ… ဟိုးထားပါ..မကေသီရယ်..ကျွန်တော် မပြောနဲ့ဆို မပြောတော့ပါဘူး… ပြီးရော.. နင်ရော သူရော… စောက်ကျင့်တွေ.. အတူတူပဲ.. ဗျာ…ဘာဖြစ်လို့လဲ.. နှာဗူးတွေလေ.. ငါမသိဘူး ထင်နေလို့လား.. ဗျာ.. ထားလိုက်တော့.. ဟိုမှာ အန်တီဆွေ လာနေပြီ… ရှူးတိုးတိုး.. ဘာမှဆက်မပြောနဲ့တော့……။ ကျွန်တော်နဲ့ တရုံးထဲက စီနီယာဖြစ်တဲ့ […]